Vertcoin စျေး - အွန်လိုင်း VTC ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Vertcoin (VTC)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Vertcoin (VTC) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Vertcoin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $15 642 937.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Vertcoin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Vertcoin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
VertcoinVTC သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.288VertcoinVTC သို့ ယူရိုEUR€0.243VertcoinVTC သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.22VertcoinVTC သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.262VertcoinVTC သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr2.56VertcoinVTC သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.1.81VertcoinVTC သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč6.35VertcoinVTC သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł1.07VertcoinVTC သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.381VertcoinVTC သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.402VertcoinVTC သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$6.44VertcoinVTC သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$2.23VertcoinVTC သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$1.57VertcoinVTC သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹21.58VertcoinVTC သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.48.56VertcoinVTC သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.395VertcoinVTC သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.439VertcoinVTC သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿8.95VertcoinVTC သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥2VertcoinVTC သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥30.81VertcoinVTC သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩341.47VertcoinVTC သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦110.89VertcoinVTC သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽21.17VertcoinVTC သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴7.94
VertcoinVTC သို့ BitcoinBTC0.00002 VertcoinVTC သို့ EthereumETH0.000751 VertcoinVTC သို့ LitecoinLTC0.0053 VertcoinVTC သို့ DigitalCashDASH0.00318 VertcoinVTC သို့ MoneroXMR0.00324 VertcoinVTC သို့ NxtNXT22.49 VertcoinVTC သို့ Ethereum ClassicETC0.0425 VertcoinVTC သို့ DogecoinDOGE83.22 VertcoinVTC သို့ ZCashZEC0.0035 VertcoinVTC သို့ BitsharesBTS8.88 VertcoinVTC သို့ DigiByteDGB9.23 VertcoinVTC သို့ RippleXRP1.02 VertcoinVTC သို့ BitcoinDarkBTCD0.00994 VertcoinVTC သို့ PeerCoinPPC0.957 VertcoinVTC သို့ CraigsCoinCRAIG131.4 VertcoinVTC သို့ BitstakeXBS12.3 VertcoinVTC သို့ PayCoinXPY5.03 VertcoinVTC သို့ ProsperCoinPRC36.19 VertcoinVTC သို့ YbCoinYBC0.000155 VertcoinVTC သို့ DarkKushDANK92.55 VertcoinVTC သို့ GiveCoinGIVE624.64 VertcoinVTC သို့ KoboCoinKOBO65.7 VertcoinVTC သို့ DarkTokenDT0.266 VertcoinVTC သို့ CETUS CoinCETI832.97